Semalt विशेषज्ञ मा7SEO आवश्यक जब तपाइँको साइट को अनुकूलन
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) आवश्यक छ। यसले तपाइँको तपाइँको वेबसाइटलाई स्थिति निर्धारण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जब सम्भावित खरीदारहरूले तपाइँले प्रदान गरिरहनु भएको सेवाहरूको खोजी गरिरहेका छन् जुन फेला पर्दछ (जुन कि खरीद प्रक्रियाको महत्वपूर्ण बिन्दु हो)।
त्यसो भए, गुगल, याहू, बिंग र अन्य खोजी ईन्जिनहरूले के खोज्छन्? तपाइँ कसरी एक वेबसाइट निर्माण गर्नुहुन्छ जुन दुबै खोजी ईन्जिन र एकसाथ मानिसहरूलाई अपील गर्दछ?
रायन जोनसन, Semalt का वरिष्ठ बिक्री प्रबन्धक, यहाँ वर्णन गर्दछ कि SEO कसरी तपाईंको वेब उपस्थिति लाभदायक बनाउँछ।
यदि तपाईं एसईओको आधारभूत कुराहरू छोड्नुहुन्छ भने तपाईं धेरै हासिल गर्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा, त्यसो गर्नु भनेको दाँत माझ्ने बेलामा, कपालमा कम्बल गर्ने र नुहाउने क्रममा फेन्सी कपडा, गहना र जुत्तामा पैसा खर्च गर्नु जस्तै हो। यो एक व्यर्थ प्रयास हो। हातमा मामलामा फिर्ता। मौलिक एसईओ को उद्देश्य खोज इन्जिनहरू धोका दिनको लागि होइन। यसको सट्टा यसको उद्देश्य भनेको प्रयोगकर्तालाई राम्रो अनुभव प्रदान गर्नु हो र तपाईंको ईन्जिन खोज सर्च ईन्जिनमा कुराकानी गर्नु हो ताकि उनीहरूले तपाईंको वेबसाइट सिफारिस गर्न सक्दछन्।
दिमागमा त्यो साथ, यहाँ आवश्यक छन्:
# तपाइँको वेबसाइट केक हो
तपाईका लिंकहरू, सामाजिक मिडिया संलग्नता र भुक्तान गरिएका खोजीहरू केकमा आईसिंग हुन् जुन निश्चित रूपमा चिनी बिना सामग्री, साइट संरचना, सामग्री प्रबन्धन प्रणाली, र जानकारी वास्तुकलाको बिना गर्न सक्दैन। चिनी बिना, तपाईं संग केक छैन
# खोजी ईन्जिनहरू के खोज्दैछन्?
खोज ईन्जिनहरूले प्रासंगिक हुन खोज्छन्। यसको मतलब यो हो कि उनीहरूले सामग्री वा वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्दर्भित गर्न उनीहरूको स्तरलाई राम्रो गर्न सक्छन् जुन उनीहरूले खोजिरहेका हुन सक्छन्। त्यसो भए कसरी गुगल, बिंग, याहू यो निर्धारण गर्छन्? खैर, तिनीहरूले विचार:
सामग्री - विषयवस्तु, वर्णन, शीर्षक र लेखिएको पाठ द्वारा निर्धारित
प्रदर्शन - पृष्ठ लोड गति
# राम्रो किताबहरूमा रहन यो बचाउनुहोस्
खोज ईन्जिनहरूले खोजिरहेका छैनन्:
कीवर्ड भरिएका सामग्री
लि purchased्कहरू खरिद गरियो - यसले तपाईंलाई कहिँ पनि प्राप्त गर्दैन
खराब प्रयोगकर्ता अनुभव - धेरै विज्ञापनहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
# तपाईंको व्यवसाय मोडेल स्वीकार्नुहोस्
जबकि यो एकदम स्पष्ट छ, तपाईं ध्यान नदिने धेरै मानिसहरूबाट चकित हुनुहुनेछ। उनीहरूलाई के थाहा छ थाहा छैन। आफैलाई सोध्नुहोस् तपाईंको उद्देश्य के हो, के सम्पत्ति तपाईंको निपटानमा छ, दायित्वहरू, त्यसपछि परिभाषित गर्नुहोस् तपाईंको लागि रूपान्तरणले के गठन गर्दछ।
# बहु च्यानलहरूको लागि अप्टिमाइज गर्नुहोस्
उचित कुञ्जी शव्द उपयोग अनसाइट सामानको लागि मात्र आरक्षित हुनु हुँदैन। समान अन्य प्लेटफार्महरूमा लागू हुन सक्छ। यसले तपाईंको सामाजिक मिडिया स engage्लग्नता, ईमेल मार्केटि,, र टिभी / रेडियो विज्ञापन प्लस कोर्स प्रिन्ट मिडियाको स्पर्श गर्दछ।
# राम्रो डोमेन छनौट गर्नुहोस्
उदाहरणका लागि उप-रूट डाइरेक्टरी डोमेनहरू प्रयोग गरेर सुसंगत हुन प्रयास गर्नुहोस्। SEo.example जस्तै सबडोमेन भन्दा। डोमेनमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस् किन कि वृद्धहरू नयाँ भन्दा राम्रो देखिएको छ।
# विभिन्न उपकरणहरूका लागि अप्टिमाइज गर्नुहोस्
तपाइँको वेबसाइट कुनै पनि उपकरणमा उचित अवलोकनको लागि अनुकूलित हुनुपर्दछ। र भिडियोहरू वा gifs जस्तो धनी सामग्री सिर्जना गर्न सम्झना गर्नुहोस्।